.: Ko Moe's Electronics Notes :.: April 2010
Inductive Power Transfer (IPT) or Wireless Power
Inductive Power Transfer (IPT) ဆိုတာကတော့ Induction coil ကို သုံးပြီး ထုတ်တဲ့နည်းပါပဲ။ Induction coil တစ်ခုနားကို တစ်ခု Metal body ကပ်လိုက်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ Power ကို ယူသုံးတာပါ။ ကျတော်တွေ့ဖူးတာကတော့ Panasonic Cordless phone တွေကို changing လုပ်တဲ့နေရာမှာ Wireless/ Plugless power charger အဖြစ်သုံးကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက Smartstud System (Traffic Control system) တွေမှာ အများဆုံးသုံးပါတယ်။ အောက်မှာ Prototype လေး လုပ်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။
Inductive Power Transfer (IPT) Prototype
Wireless Energy sample using IPT
Posted by ကိုမိုး at Thursday, April 29, 2010 1 comment:
Labels: Electrical, Green Energy, Smartstud System, Wireless, Wireless Power
UHF RFID တွေကို Long and Wide range RFID application တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ Active Tag ကော Passive Tag ကော ၂ မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ Passive Tag က ၂၀ မီတာ လောက်အထိ လှမ်းဖတ်လို့ရပြီးတော့ Active Tag က ၈၀ မီတာလောက်အထိ လှမ်းဖတ်လို့ ရပါတယ် (RFID Tags တွေအကြောင့်ကို ကျတော် အရင်က Post တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ထားပြီးသားပါ) ။ သုံးတဲ့ Frequency ကတော့ 800 MHz to 1 GHz range ပါ။ သူက Antenna ကြီးပါတယ်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ ကောင်ဆိုရင် 460 x 460 x 50 mm အထိရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Housing နဲ့ သပ်သပ် ထဲ့ပေးရပါတယ်။ သုံးလေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေက Car parking, ERP လို နေရာကျယ်ပြန့်တဲ့ Space တွေမှာ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ သုံးလေ့ရှိတဲ့ RFID Tag အမျိုးအစားတွေကတော့ UHF EPC Gen2 Tag, UHF ISO180006B Tag (passive) တွေပါ။
UHF RFID tag (Internal Antenna)
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, April 27, 2010 No comments:
Labels: Communication, radio communication, RFID, Smart Card, UHF, Wireless
MC54-74HC4052 (Serial Data Shift Register)
MCU တစ်ခုမှာ Serial port မလောက်တော့တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် သုံးတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ Motorola က ထုတ်ပါတယ်။ ဒီ က Serial IO ၄ ခုကို တစ်လှည့်စီ Channel-select Input တွေကနေထိန်းပြီး တစ်ဖက် ရဲ့ Serial I/ O နဲ့ ချိန်ကိုက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သဘောက ရဲ့ Serial I/ O တစ်ခုတည်းကို အထွက် အ၀င်လုပ်ပြီး ဒီဘက်ကနေ Serial I/ O ကို4Channel အထိ ပွားယူလိုက်တဲ့သဘောပါ။ Serial Port ကို Multiplex လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ အောက်မှာ IC pin description နဲ့ Function table ကို ပြထားပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Friday, April 09, 20102comments:
Labels: IC, Microcontroller, RS232
Carlo Gavazzi EM21 72D (3-Phase Energy Meter)
ကျွန်တော် အခုသုံးနေတဲ့ E-Meter အမျိုးအစားပါ။ အီတလီက ထုတ်ပါတယ် (ဈေးလည်းကြီးပါတယ်)။ သူက သုံးရတာ အတော်အဆင်ပြေတယ်။ ကျတော့ Firmware ဘက်ကပြောတာပါ။ RS-232 port ကနေ command တွေပေးပြီး Data တွေကို လှမ်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ ပြောချင်တာက Carlo Gavazzi က PLC ကိုအခြေခံထားပါတယ်။ သုံးတဲ့ Protocol က Modbus ပါ။ အဲ့ဒီတော့ သူ့အတွက် (Cyclic Redundancy Check) ကို တွက်ချက်ပြီး ထဲ့ပေးရတဲ့ ပြဿနာနဲ့ RS-485 ကို သုံးထားတဲ့အတွက် 485 IC တစ်ခု ပိုထဲ့ပေးရတဲ့ အလုပ်တွေပိုလာတယ်။ နောက် Enable အတွက် I/O pin တစ်ခု အပိုထပ်သုံးရတယ်။ ဒါပေမယ့် Data တွေက တိကျတယ်၊ Response မြန်တယ် ကျတော် အရင်သုံးနေတဲ့ Plogg ထက်စာရင်ပေါ့။
Posted by ကိုမိုး at Friday, April 09, 2010 1 comment:
Labels: Electrical, Energy Meter, Hardware, Project, RS 485